Jidkii GITMO | isbeddel
← Somali Investment in Kenya
Flavors of Afro-Asiatic →
Mid ka mid ah fadeexadaha ugu foosha xun ee dawladda maanta dunida ugu awoodda badani samaysay ayaa ahaa jeelka weyn ee qayru-sharciga ah ee GITMO, Kuuba. Qofkii daawaday waraysiyadii taxanaha ahaa ee al-Jasiira ka qaadday Saami al-Xaaj, si buuxda ayuu uga dheregsan yahay waxshinnimada meeshaa taal iyo mustaqbalka mugdiga ah ee ay sii gelinayso isu soo dhawaanshaha dunida iyo is jiidhka xadaaradaha. Hase ahaatee sheekadu way kala macaan tahay marka uu ninkii GITMO loo sameeyay kuna soo silcay ka sheekaynayo iyo marka kuwii sameeyay ee wax ku soo silciyey ka sheekaynayaan. Ugu yaraan tan danbe waxay xoojinaysaa misdaaqiyadda waxa ka hore ka sheego. Buugga “The Road to GITMO” waxa uu xisaabsan yahay damiir aadannimo oo si kama’ ah u dananay, waxana uu ka dhigan yahay safiir niyad wanaag oo uu Eric Sard iyo Viveca Novak ay u dirayaan dunida muslinka ah. In kasta oo uu qoraagu yahay askari maraykan oo lix bilood turjumaan ka ahaa GITMO sidaa darteedna ay u xisaabsan tahay erey kasta oo uu qorayaa, haddana buuggiisa yar ee 75 bog (PDF) ahi waxa uu si maldahan u iftiiminayaa foolxumooyin aan dhammaad lahayd oo laga galay islaamka iyo muslimiinta ku ciil baaridday jasiiraddaa sheydaan ee Guwaantanamo-Beey, Kuuba.
Eeg sida loola dhaqmayo wiil Sucuudi ah oo lagu soo qabtay keliya in uu duulinta diyaaradaha ka baranayey dugsi uu dhigan jiray mid ka mid ah fuliyeyaashii weerarkii Manhatten, New York:
-“Wuxuu iiga warramay mid ka mid ah ilaaladu in marka uu wiilkaa Sucuudiyaanka ahi ka soo laabto denbi-baadhista uu galo salaad dheer, hadda waa xilli danbe oo habeenkii ah. Waxa aan isku daynay in aan kolba meel u beddelno si uu u daalo oo uu salaadda uga niyad jabo, laakiin mar kasta halkii ayuu ka sii wadaa. Intaa waxa uu ku daray ilaaladu in ay mushkilad kala kulmaan siday isaga iyo RABBIGII u kala durkin lahaayeen’.
Meel kale: “Markii aan weydiintiisa ku daallay ka dib, daaradda ayaa u yara baxnay si aan u yar nasanno (Fariiq, wiilka Sucuudiga ah, qoortiisa iyo lugihiisu way isu xidhan yihiin –imika uun ma ahee sidaas ayay isugu xidhnaayeen sidii loo keenay GITMO). Markii aan soo noqonnay ayay Brooke (shaqaabad su’aalo weydiinaysay Fariiq) si dhillonimo ah u furtay badhannadii surwaalkeeda iyo shaadhkeeda iyada oo jaasaysa; aniga oo anfariirsan ayaan arkayey keeshaligeeda iyo nigiskeeda bunniga ah. Fariiq kor uma eegin, waxay ku tidhi: Maxaa ku helay Fariiq miyaanad dumarka jeclayn?! Hortiisa ayay istaagtay waxayna ku khasabtay in uu soo eego jidhkeeda. Qunyar ayay gadaal uga wareegtay oo ay dhabarkiisa ku cacamisay naaseheedii! Iyada oo leh: Fariiq ma jeceshahay laabtan weyn? Waxaan filayaa waad xadantootay (…) (ereyga halkan ku xiga uma habboona amaba waa gaalnimo in uu qof muslin ahi ku dhawaaqaa)! Fariiq ciil buu is cunayay laakiin juuq ma odhan. Kursi ayay soo jiidatay oo hortiisa ayay fadhiisatay; inta ay naasaha is qabatay oo indhihiisa u dhawaysay ayay ku tidhi: kuwan maxaad ku nacaysaa?! Inta uu eegay ayuu degdeg uga jeestay oo xaggayga soo eegay. Intay qaylisay bay ku tidhi: Ma Luudi baad tahay maxaad Eric ka eegaysaa?!”
“Maalintaa waxba kama aannu dhiiqin Fariiq. Markii xigtay Brooke waxay la tashatay askari muslin ah oo ka tirsanaa ilaalada GITMO, waxay ka codsatay in uu fikrad ka siiyo sidii ay Fariiq iyo Rabbigii u kala durkin lahayd! Waxa uu u sheegay in ay ku tidhaahdo waxa aan ku jiraa toddobaadkii, dabadeed ay wejiga ka marmariso dhiig isla markaana biyaha loo diido. Waxa uu ku yidhi: Haddii aad sidaa samayso, salaad tukan maayo ilaahayna hor istaagi kari maayo(qoraagu waxa uu yidhi: waxa aan la yaabay sida uu qof muslin ahi qof kale oo muslin ah taas ugu samayn karo ) . Brooke kumay jirin toddobaadkii laakiin waxay hoosta iska marmarisay khad cas oo dhiig u eg. Markii aan hor fadhiisannay Fariiq sidii hore si la mid ah ayuu u diiday in uu wax jawaabo ah na siiyo. Dabadeed isaga oo arkaya inta ay gudaha faraha iska gelisay ayay soo saartay fareheedii oo cas. Inta ay dhaqaaqday ayay wejiga ka marmarisay. Waxay u sheegtay in ay toddobaadkii caadada ku jirto, biyihiina laga jaray qolka uu ku xidhan yahay; markaana aanay salaadi u ansaxayn inta uu iska maydhayo. Fariiq inta uu aad u qaylyey ‘aah aah aah’ ayuu gariir iyo oohin bilaabay. Sharciga xabsigu waxa uu oggolaa in cadaadis kasta oo suurto gal ah lagu sameeyo muslimiinta meesha ku xidhan.
Waxaas iyo wax ka sii liita ayaa lagu sameeyaa dadka jasiiraddaa baas lagu ururiyey. Waxa se waxkasooqaad leh sida uu damiirka Eric u damqanayo. Waxa uu qoray: “Qolkii baasaa ayaan ka soo baxnay aniga oo niyad jab darteed gidaarrada qabqabsanaya. Brooke ayaan eegay waxaanan arkay iyada oo lafteedu ooyaysa. Markii aan weydiiyey waxa helay waxay tidhi waxan aan samaynayo ma garanayo sax iyo khalad midka uu yahay. Habeenkaa aniga oo bestay ah ayaan 1:30am qolkaygii soo gaadhay, maydho ayaan is idhi laakiin habeenkaa waxaan dareemayey uskag aanay xitaa iga maydhi karin dhammaan biyaha yaalla Kuubi, casho waan samaysan kari waayey, hurdadiina waxa iga fogeeyay ceeb culayskeedu laabta ii fadhiistay dabadeed inta aan koob shaaha kursi la fadhiistay ayaan oohin bilaabay. Habeenkaa waxaan dareemay in aan wax weyn waayay, innagu haddaynu maraykan nahay wax baynu weynay, akhlaaqiyaadkeennii ayaan luminnay, mabaadi’deennii iyo dadnimadeenniiba waxaan siisanay macluumaad yar oo aan qof ka helno, laakiin xitaa dhaqankaa qudhunka ahi ma guulaysan”.
Sheekadan inteeda badani si caadi ah ayay u dhacaysaa, meelaha qaar ayaase mudan in la dul istaago. Eric iyo saaxiibaddii Viveca ma runtoodbaa in sidaas oo kale damiir nooli galbeed innooga xigo? Mise waa tuug iyo booliskii ay weligoodba ciyaari jireen?
Posted by Warfaa on Juunyo 16, 2011 in Uncategorized